I-Lasmaris Bouquet - Indlu ka-Evdokia - I-Airbnb
I-Lasmaris Bouquet - Indlu ka-Evdokia
Sykopetra, Limassol, i-Cyprus
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Nelli
Sinxenxa izivakashi zethu ukuthi zibe nesipiliyoni esiyingqayizivele edolobhaneni laseSykopetra eCyprus. Indlu ka-Evdokia yakhiwa cishe ngo-1750 A.D engxenyeni enkulu yomphakathi. Ngesikhathi sokulungiswa isimo sendabuko sezindlu sahlala singakaze sithintwe.
“INDLU KA-EVDOKIA” iyindlu enezitezi ezimbili. Isitezi esiphansi sinekhishi elihlome ngokuphelele, igumbi lokudlela, igumbi lokuhlala (elinosofa aba-2 ongaphenduka umbhede ophindwe kabili) indawo yomlilo kanye nendlu yangasese. Esitezi sesibili uzothola uvulandi omkhulu omboziwe, igumbi lokulala elikhulu, igumbi lesibili elinemibhede emibili kanye negumbi lokugezela elineJacuzzi. Indlu izungezwe izingadi namagceke amise ngendlela ehlukene. Ngaphambili kwegceke kukhona umbhaki omkhulu wendabuko kanye nomncane owenzelwe ukulungiswa kokudla (isb. kleftiko).
4.83 · 8 okushiwo abanye
Ungakwazi ukuboleka amabhayisikili uhambo ezintabeni. Ungakwazi futhi ukuhlela nomshayeli wethu futhi uvakashele izindawo ezinhle zokugibela izintaba noma izithakazelo ezikhethekile ezifana ne-geology, ukufunda kwezitshalo nezilwane noma ukuthwebula izithombe.
Unethuba uma ufisa ukuvakashela amasimu ethu futhi ujabulele ngaphandle kwenkokhiso izithelo zethu (zikhiqizwa ngokwezinto eziphilayo ngaphandle kwezidakamizwa eziyingozi noma umanyolo). Ungaphila okuhlangenwe nakho kwemisebenzi yabalimi njengokukha iminqumo, ama-alimondi, ama-tangerine kanye nendlela esikhiqiza ngayo imidumba yendabuko. Ungavakashela nezingane zakho ipulazi nezilwane futhi ujabulele impilo yezolimo.